ကလိုစေးထူး: လောဘစိတ်ကလေး ၃၆၀...
Posted by ကလိုစေးထူး at 1:37 AM
အခုပိုစ့်လေးကို ဖတ်ပြီး ရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ဓါတ်မကျပဲ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးတဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးရယ်.. အဲ့ဒီ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ရှုံးတော့ ပြောသွားတဲ့ ဒေါသစိတ်လေး ၃၆၀ ရယ် နှိုင်းယှဉ် စဉ်းစားနေမိပါတယ်..
လူ့သဘောဆိုတာ တယ်ပြောရ ခက်ပါလားနော်..
အလုပ်တွေ အဆင်ပြေပါစေ.. Chess ပွဲတွေမှာ အနိုင်ရသလိုပဲ.. ဘဝစစ်ပွဲတွေမှာလည်း အမြဲ အနိုင်ရပါစေလို့..
Sep 4, 2009, 2:47:00 AM
တစိမ်းတရံစာမပြောနဲ့ မိသားစုအတွင်းထဲမှာတောင် ကိုယ်နိမ့်ကျစဉ်က ပေးခဲ့ကျွေးခဲ့ မြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့သူက သူ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ ကိုယ့်အစွမ်းလုံ့လ ကံတရား အားလုံးပေါင်းပြီး ကိုယ်က သူ့လို အောင်မြင်အဆင်ပြေလာတဲ့အခါ၊
ဘယ်လိုမှဟန်မဆောင်နိုင်ဘဲ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဟန့်တားပျက်စီးစေဖို့ ကြိုးစာတာကြုံခဲ့ရတယ်။ ဘေးကမိသားစုတွေ မိတ်ဆွေတွေတောင် အံ့သြတကြီးဖြစ်ကြတယ်။တချိန်လုံး သူပေးလာ
ကျွေးလာတဲ့သူက သူနဲ့တန်းတူဖြစ်လာတာ ဘယ်လိုမှစိတ်ထဲမှာ လက်ခံလို့မရဘူးဖြစ်နေပုံပဲလို့ နီးစပ်သူတွေကဆိုကြတယ်။ ကိုယ့်မှာတော့ သူ့ကိုတချိန်လုံးကျေးဇူးတင်လွန်းလို့ ဘုရားလိုကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့သူ၊ အခု ကိုယ့်ကိုဖျက်လိုဖျက်ဆီးတွေလုပ်လာတော့ အကြည်ညိုတွေပျက် စိတ်ကသိကအောက်တွေ ဖြစ်ရတာပေါ့။ ကံ၊ ကံဧ။်အကျိုးကိုယုံသူမို့ ကျေးဇူးရှင်ကို ငါညိုငြင်မိနေပြီလို့တွေးမိတိုင်း စိတ်ချောက်ချားရပါတယ်။ ကိုယ်ကလဲ သူများဝန်တိုစရာကောင်းအောင်ကို ကံကောင်းခဲ့တာကိုး။
Sep 4, 2009, 3:05:00 AM
ဘရာသာရေ မတွေ့ ရတာတောင် အတော် ကြာပေါ့
အလုပ်တေါ အစဉ်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်
Sep 4, 2009, 4:22:00 AM
Facebook က poker မှာ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ chips ပြားလေးရှုံးသွားလို့ ဆဲဆို ရန်စတဲ့ အဖြူကောင်တွေ အများကြီးဘဲ နိုင်ငံကြီးသားတွေဆိုပြီး အောက်တန်းကျ တဲ့ အဖြူကောင်တွေထဲ မှာ အမေရိကန်ကောင်တွေ ဗြိတိန် က မန်ချက်စတာ လိဒ် လန်ဒန် ဘာမင်ဂမ် စတဲ့မြို့တွေကကောင်တွေအများကြီးဘဲ တွေ့ဘူးတယ်
Sep 4, 2009, 6:21:00 AM
အွန်လိုင်းဂိန်းမှာတောင် အဲသည်လို စိတ်ရှိသူဟာ အပြင်မှာလည်း ညစ်ဖို့ များပါတယ်။
အိုင်းစတိုင်းရဲ့ စကားတခုကို သတိရမိတယ်။
အသေးအဖွဲဆိုပြီး လိမ်တတ်သူတွေကို ကြီးကြီးမားမားကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင်လည်း ယုံကြည်စိတ်ချလို့ မရဘူးတဲ့။
Sep 4, 2009, 6:29:00 AM
Sep 4, 2009, 8:01:00 AM
welcome back......... အလုပ်လဲအဆင်ပြေပါစေဗျာ။ ဒါနဲ့ အလုပ်ပြုတ်နေတဲ့သူနဲ့ ဘယ်နေ့ပြုတ်မလဲလို့ တထိတ်ထိတ်နေရတဲ့သူနဲ့ ဘယ်သူက အခြေအနေပိုဆိုးလဲဗျ။ လူ့စိတ်တွေ လိုက်ကြည့်ရင်တော့ ကိုယ်ပဲ မောပါလိမ့်မယ်ဗျာ။
Sep 4, 2009, 8:58:00 AM
အကိုရေ လာဖတ်တယ်း) အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ တခါတလေ လူတွေက အမြဲ အနိုင်ပဲ လိုချင်တာပဲ ကျနော်လဲ ဘိလိယက်ထိုးနေရင်း သူတို့ ရှုံးရင် မပြောမဆို ထွက်သွားတာ စိတ်အရမ်းတိုတာပဲ စိတ်ဓါတ် စိတ်ဓါတ်
Sep 4, 2009, 12:07:00 PM
တို့က ခုမှ ကားပေါ့ဗ်နဲ့ သင်ထိုးလေးထိုးနေတဲ့ ၀ါသနာရှင်ကလေးပါ။
အကိုဂျီး တကောင်ပဲ အကျောပေး။
Sep 4, 2009, 12:08:00 PM
အစစ အဆင်ပြေပါစေ ကိုစေးထူးရေ..
အမလဲ အလုပ်က ထွက်ထားတယ်။ တယောက်တည်းတောင် မဟုတ်၊ နှစ်ယောက်စလုံး။ ဒီလိုအချိန်ကြီးမှာ သတ္တိရှိတယ် ပြောမလား၊ မိုက်တယ် ပြောမလား။ နှစ်ခုစလုံးလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ စိတ်ချမ်းသာဖို့သာ အဓိက လို့ တယောက်ကို တယောက် အားပေးမိတယ်။
ကြုံလာတာကို ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့။ ဒါ စိန်ခေါ်မှုတခုလို့ ပြောရမှာပဲ။ အရှိအတိုင်း လက်ခံပြီး ကိုယ့်ဖက်က ကြိုးစားမှု မလျော့ပါစေနဲ့။ စိတ်ဓာတ်မကျ၊ အားမငယ်ဖို့ ကိုယ့်အဖြစ်နဲ့ယှဉ်ပြီး အားပေးသွားတာပါ။ အမလဲ ကဗျာဆရာ၊ ကျောင်းဆရာမ သမီးဆိုတော့ အဆင်ပြေ ပြည့်စုံလာတဲ့ဘ၀က လာတာ မဟုတ်လို့ ဒီလိုလောကဓံမျိုးတော့ ခံနိုင်ရည် ရှိပါတယ်လေ။
Sep 4, 2009, 12:23:00 PM
ကိုရင်နော်ခင်လေးနွယ်...၊ ဟုတ်တယ်၊ ကျနော်လဲ ပို့စ်အသစ် မတင်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာသွားတယ်။ တပုဒ်အသစ်တင်လိုက်တိုင်း အမြဲလာလာအားပေးတတ်တာကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ကျနော် အဲလူကြီးကို နိုင်တာတော့ အနိုင်မခံအရှုံးမပေးတဲ့ စိတ်ထက် ပေတေကပ်သပ်ပြီး ကစားလိုက်တာ။ :D
Anonymous ...၊ ဟုတ်ကဲ့၊ တခါတလေ ဖြစ်တတ်တာလေးတွေပေါ့။
ရွက်လွှင့်ခြင်း...၊ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်နဲ့ အလုပ်နဲ့ စိန်ပြေးတမ်းကစားနေလို့ပါ။ အဆင်ကတော့ ဒီလိုပဲ ပြေသွားမယ် ထင်ပါတယ်။
ko kyaw ဒီလိုပဲ၊ လူမမြင်ရဘူးဆိုတော့ အပီတီးတာနေမယ်။ :D
Ko Paw မတွေ့တာကြာပြီဗျ နော...။ :)
Rita တခါလာပြုံး တကျပ်အခွန်ကောက်ရမယ် ထင်တယ်။
ကလူသစ်...၊ ၀ဲလ်ကမ်း ခဏခဏ ဘက်နေရတာ မမောဘူးလား။ :D အလုပ်ပြုတ်နေတဲ့လူနဲ့ ဘယ်နေ့ပြုတ်မလဲ ရင်ထိတ်ရသူ အတူတူနဲ့အနူနူပဲနေမယ်။ ကျနော်တော့ နှစ်ခုလုံး ဖြစ်ဖူးတော့ အတူတူပဲ။ :D
တောင်ပေါ်သား၊ အမြဲတမ်း လာအားပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးပါ ညီလေးရေ။
ဝေလေလေ...၊ ကားပေါ့ဗ်တို့ ကက်စပါရော့တို့ဆိုတာ ကျနော့်နဲ့ တန်းမတူဘူးဗျ။ ကျနော်က ပြည်နယ်ချန်ပလုံ။ :P
မချိုသင်း...၊ ဒါကြောင့် အမလဲ ကျနော့်လို လေးပတ် တပုဒ်နှုန်းဖြစ်နေတာကိုးးး။ အားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမရေ။ ကျနော်စိတ်ဓာတ်တော့ တကယ်ကို မကျပါဘူး။ ဒီလိုပါပဲ၊ စိန်ပြေးတမ်းကစားရသလိုပေါ့။ သူကပြေးလိုက်၊ ကိုယ်က လိုက်လိုက်၊ တွေးတတ်ရင် နေရာစုံတောင် ရောက်ဖူးသေးတယ်။ :D အမတို့လဲ အစစအဆင်ပြေပါစေ။
Sep 4, 2009, 3:03:00 PM
အသစ်ဖတ်ရတာ ကျေးဇူး ကိုစေးထူး။ အပျော်တမ်း အချိန်ဖြုန်းဖို့ ကစားကြတယ်ထင်တာ... ခက်တာပဲနော်။ အလုပ်ကံကောင်းပါစေ။
Sep 5, 2009, 2:37:00 AM
သဘောကျပါတယ်..ဗျာ...။စိတ်ကို ဘယ်လိုထား ဆိုတာ
ပြောပြတဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။ပိုစ့်အသစ်ကို စောင့်ရင်း Connection က နှေးရင်းနဲ့ ခုမှ ရောက်လာပြီး...
Comment ရေးဖြစ်တော့တယ်....။အမြဲ လာမယ်ဗျ...။
Sep 5, 2009, 4:10:00 AM
မြန်မြန် အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
R အကြီးနဲ့ Rita
Sep 5, 2009, 4:42:00 AM
Sep 5, 2009, 5:55:00 AM
မီယာ...၊ ဟုတ်ကဲ့။ ကျနော်တော့ ချက်စ်ကစားတာ ၀ါသနာပါလို့ သွားဆော့ဖြစ်တာပါ။ အားပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးပါ။
တေဇာ...၊ ဟုတ်ကဲ့ အမြဲလာလည်သလို ဝေဖန်လို့လဲရပါတယ်။
R အကြီးကြီးနဲ့ မရီတာ...၊ ကျေးဇူးဗျို့။ :)
တဆက်တည်း ကျနော့်အမှားတခုကို တောင်းပန်ရဦးမယ်။ ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် ကို ဘယ်လိုက ဘယ်လို ကိုရင်နော်ခင်လေးနွယ်လို့ မှားရိုက်မိတယ် မသိပါဘူး။ ခင်လေးငယ်ကနေ ခင်လေးနွယ်ဖြစ်သွားတဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပြီး ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Sep 5, 2009, 9:35:00 AM
Sep 5, 2009, 11:20:00 AM
တခါလောက် ချိန်းပြီး ချက်စ် ထိုးရအောင်.. :)
Sep 5, 2009, 10:43:00 PM
အလုပ် အသစ်မှာ အဆင်ပြေပါစေ...
Sep 6, 2009, 2:10:00 AM
ချက်ထိုးတာတော့ ဥာဏ်နဲလို့နားကိုမလည်တာ…
ပြောရရင် ကျွန်မလဲ ခုတလော အိမ်ရောက်တာနဲ့ ဂိမ်းနဲ့ အလုပ်ရှူပ်နေလို့အမျိူးသားကတောင် ကြည့်မရဖြစ်နေတယ်လေ…
အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ…
Sep 9, 2009, 12:15:00 AM
Interesting and read the very last post .. :)
ဟလို ဟလို ပျောက်နေပြန်ပြီလား
Sep 18, 2009, 10:44:00 AM
Sep 21, 2009, 7:25:00 AM
ကိုကရောင်ကြီး မတွေ့တာ ကြာပြီဗျာ..ခင်ဗျားကို သတိရလို့ လာလည်တာဗျ....ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခုလို လာနှုတ်ဆက်ရတာ ၀မ်းသာသဗျာ.......
Oct 1, 2009, 4:01:00 PM
အင်း......... welcome back ပြောဖို့စောင့်နေတယ်လို့ လာသတိပေးတာ။
Oct 22, 2009, 11:15:00 AM
အလုပ်မပြုတ် ထွက်ထားသည်.... လက်ရွှေးစင်တော့ မဟုတ်... သို့ပေသော်လည်း လက်နဲ့ ကိုင်၍ ရွှေ့တတ်သည်... အားနေသည်... ချက်ထိုးမည်.. lol...
Nov 2, 2009, 12:37:00 PM
Nov 19, 2009, 7:29:00 AM
ရွှတ်....ကလို.... ဟိုဖက်နဲနဲတိုး... ကလူလဲ အိပ်ချင်လို့
Nov 21, 2009, 3:49:00 AM
ko say htoo yayyyyy
Dec 8, 2009, 8:58:00 PM
အရင်ဆုံး အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေစေဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ။ နောက် စိတ်ဓါတ်မကျပဲ ဇွဲနဲ့ ကြိုးစားလို့ရတဲ့ အောင်မြင်မှုကို ပြတဲ့အတွက်ရော မသန့်မရှင်းကစားပြီး အနိုင်ရချင်တဲ့လူရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုပါ မြင်လိုက်မိစေတဲ့အတွက်ရော ကျေးဇူးပါ။
Dec 12, 2009, 5:38:00 AM
Dec 27, 2009, 2:00:00 PM
နှစ်သစ်မှာ လာနှုတ်ဆက်တာ အကိုစေးထူး
Dec 30, 2009, 2:49:00 PM
Happy New Year ကိုစေးထူးရေ… ၂၀၁၀မှာ ငြိမ်နေတဲ့ နဂျယ်ကောင်လေးကို လာနှိုးတာပါ
Dec 31, 2009, 9:40:00 AM
Dec 31, 2009, 7:39:00 PM
((((((((((( Happy New Year ))))))))))))))
Jan 1, 2010, 4:07:00 AM
နှင်းဆီက အလည်လာရင်းနဲ့ အကို့စာလေးကို ဖတ်မိတာပါ....
ပိုစ့်လေးကနေ အတွေးတွေ ဆင်ခြင်စရာတွေအများကြီးရသွားပါတယ်...
ဒီလို အဖြစ်မျိုးက နိုင်ငံခြားသားတွေမှမဟုတ်ပါဘူး...လူမျိုးတော်တော်များများကတော့ ကိုယ်နိုင်မယ်လို့ သေချာပေါက် ထင်ထားပြီးမှ အရူံးပေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာ ဘဝတိုက်ပွဲတင်မကပါဘူး ဒီလိုအသေးအဖွဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေမှာပါ စိတ်ဓါတ်တွေပြောင်းလည်းသွားတတ်ကျပါတယ်ရှင်.......
အကိုရေ ခုအလုပ်အဆင်မပြေလို့လည်း စိတ်မညစ်ပါနဲ့နော် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ အလုပ်ရချင်လို့တာ ခုခနစိတ်ညစ်နေရတယ်လို့တာ တွေးလိုက်ပါနော်.....
အစစအရာရာ အဆင်ပြေ၍ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေရှင်.....
Jan 14, 2010, 12:17:00 PM
ငါ့အကို အသစ်တင်တော့ဘူးလားဝေးးးးးးးးး မြင်နေရတယ်နော် တင်တော့လေ စောင့်နေတဲ့လူတွေလဲ များနေပြီး)
Jan 21, 2010, 3:56:00 AM
အလုပ်တွေ သိပ်များနေလား.. စာမရေးတာကြာလှပြီနော်...။
Feb 21, 2010, 3:19:00 AM
Feb 21, 2010, 11:39:00 PM
Apr 1, 2010, 11:30:00 AM
Apr 12, 2010, 1:39:00 AM